I-5 tricks yokuhombisa eya kukunceda wonwabe ekhaya | IBezzia
5 amaqhinga okuhombisa anokukunceda wonwabe ngakumbi ekhaya
UToñy Torres | | Ikhaya
Inyathelo lokuqala lokonwaba ekhaya kukuba unayo ihonjiswe ngendlela ehambisa uxolo, imvisiswano kunye nolonwabo kuwe. Ayinamsebenzi ukuba intle okanye incinci, yeyangoku okanye ukuba ungatyala imali encinci ekuhombiseni, into ebalulekileyo kukuba indlu yakho inayo yonke into ekwenza wonwabe. Kukho namaqhinga okuhombisa anokuguqula nayiphi na indlu ibe yitempile yoxolo.
Eyona ndlela yokuziva ukhululekile ekhayeni lakho kukuba uyihombise ngendlela othanda ngayo kwaye ungafezekisa ngezinto ezincinci, ezinje ngemizobo, iziqwenga ezincinci zokuhombisa ngemibala oyithandayo, amalaphu athile kunye nefanitshala. Ukuba ungangena ekhayeni lakho kwaye uzive ukuba limele wena, uya kuba nendlela evulekileyo ukonwaba kakhulu kuyo.
1 Amaqhinga okuhombisa ukonwaba ekhaya
2 Ucwangco kunye nococeko
Amaqhinga okuhombisa ukonwaba ekhaya
Asinguye wonke umntu onesiphiwo sokuhombisa. Kodwa akuyomfuneko ukuba nendlu yamaphephancwadi ukuze ukhululeke kwaye wonwabe kuyo. Ufuna kuphela izinto ezikwenza uzive ulungile, ezikunika uxolo kwaye ikhaya lakho liba yindawo efanelekileyo. Qaphela ezi ngcebiso zilandelayo zokuhombisa ukuze indlu yakho ibe yindawo ethambileyo kwaye apho ungonwaba khona.
Into yokuhombisa efanelekileyo: Ukubona ingubo entle yokubukela umabonwakude esofeni kuyathuthuzela, umfanekiso omnye ukunceda ukuba ube nomfanekiso ngqondweni womzuzwana wentuthuzelo. Njengo isityalo onokuthi uhombise ngaso igumbi, ulikhathalele kwaye ulibukele likhula kancinci kancinci, yinto eyenza indlu ihlale kamnandi. Cinga ngezinto ezikwenza uzive ngale ndlela kwaye uzibeke ekhayeni lakho.
Into engaqhelekanga, engaqhelekanga kwaye engaqhelekanga: Ukuba nento ekhethekileyo yokuhombisa kuya kukunceda wonwabe ekhaya. Ukuyijonga nje kuya kukuthatha ngamanye amaxesha, uya kuba neenkumbulo ezimnandi kunye nazo imvakalelo ezenzekelayo yolonwabo.
Into yokuhombisa eyenza ujonge phezuluImalunga nokubeka into yokuhombisa kwindawo ephezulu, ekunyanzela ukuba ujonge phezulu kwaye uyibone le ndawo kwindawo ebonakalayo. Indawo isityalo esandisiweyo okanye esophahleni esinendawo yokuhlala kwi-macramé, ukhetho lwezikwere ezime nkqo okanye into ende yokuhombisa.
Izinto zendalo: Uhlobo lweNordic loyiso ekuhombiseni kwasekhaya iminyaka kwaye ayothusi, kuba isekwe kwizinto zendalo kuzo zonke iziqwenga zokuhombisa. Imithi yepine enganyangekiyo, iifayibha zendalo ngemibala engathathi hlangothi ezisa uxolo, izityalo ezizisa umnqweno wobomi nakweliphi na igumbi. Beka izinto zendalo ekhaya kwaye ngokuqinisekileyo uya kuziva wonwabile kuyo.
Amakhandlela ukukhanyisa ubusukuAmakhandlela abe yinto ebalulekileyo ekuhombiseni kwasekhaya. Ukongeza ekusebenziseni njengokuhlaziya umoya, bagqibelele ukukhanyisa igumbi ebusuku. Hayi kumzuzu wothando kuphela, jonga uthotho ngelixa uphumle ngokukhanya kwamakhandlela Kuya kukunceda uzive ukhululekile kwaye ukhululekile ekhaya.
Ucwangco kunye nococeko
Umhombiso ukwasebenza ukugcina iifayile ze- ucwangco kunye nococeko ekhaya. Into ebalulekileyo ukuba ufuna ukuhlala kamnandi kwaye wonwabe ekhaya. Yibambe Izinto zokuhombisa nezisebenza njengendawo yokugcina, ezinjengeebhasikiti ezi-wicker, iibhokisi zezinto zendalo okanye iihanger zelaphu. Unokucwangcisa iitshaja kunye neentambo ezihlala zihlala kuyo yonke indawo. Ulawulo lweTV kunye nazo zonke ezo zinto zingenayo indawo esisigxina kwaye zihlala zisembindini.
Faka umoya kwindlu yakho yonke imihla, sebenzisa izihlaziya zomoya zendalo ukuze zinuke ngendlela oyithandayo kwaye ungavumeli ukucocwa kuqokeleleke. Ngezimbo ezincinci zemihla ngemihla ezinje yenza iibhedi, utshiye, ushiye isofa kunye nezihlalo ezibekwe kakuhle kunye nekhitshi eliqokelelweyo, unokuba nekhaya eliya kukwenza uzive uxolile kwaye ugcwele ulonwabo. Konwabele ikhaya lakho njengetempile yakho, indawo yakho yokusabela, kunye nendawo yakho emhlabeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » 5 amaqhinga okuhombisa anokukunceda wonwabe ngakumbi ekhaya
Isiqhelo soqeqesho sokunqamula kunxibelelwano lwefowuni
Ucoceko lomlomo: Uluhlambulula njani ulwimi ngokuchanekileyo